जनता हाम्रो पक्षमा छन्, जित हाम्रै हुन्छ : टिकाराम खड्का - Tulsipur Online
जनता हाम्रो पक्षमा छन्, जित हाम्रै हुन्छ : टिकाराम खड्का
Posted by News Desk | २७ बैशाख २०७९, मंगलवार १३:१५ |
चुनावको अन्तिम प्रचारमा हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
हामी निर्वाचनमा कटिवद्ध भएर लागेको करिब २ हप्ता जति भएको छ । प्रचारप्रसारको काममा हामी जति अगाडी बढेका छौ । त्यति नै हामी उत्साहित हुँदै गएका छौँ । हामीले भेटेका र छलफल गरेका मतदाताहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । समाजले खोजेको जस्तो योग्य उम्मेदवार हामीले पाएका छौ भनेर उहाँहरु निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । हामीले निर्वाचनका सन्दर्भमा जुन खालका एजेण्डा बोकेका छौँ त्यसले जनताको मनलाई राम्रोसँग छोएको छ । फेरी म आफैपनि इमान्दारिताको राजनीति गरेर यहाँसम्म आएको हुँ । मैले व्यक्तिगतरुपमा अहिलेसम्म कसैको मन दुखाउने काम गरेको छैन । हामीले आगामी पाँच वर्षभित्र कस्तो खालेको तुलसीपुर बनाउने भन्ने कुरालाई हाम्रो संकल्प पत्रमा समेटेका छौ । हाम्रा एजेण्डाहरु जनताका साना साना आवश्यकतासँग जोडिएका छन् । यसअर्थमा हामी विजयी मानसिकताका साथमा चुनावी मैदानमा होमिएका छौं ।
यो निर्वाचनमा पाँच दलसँग लड्न सजिलो छ त ?
स्थानीय तहको निर्वाचन शक्तिले भन्दा पनि एजेण्डा र मुद्दाले लड्ने हो । हामी जुन एजेण्डा बोकेर जनताका माझमा पुग्न खोजेका छौ त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो । नेकपा एमाले जनताको विश्वास जितेको पाटी हो । आज जनतालाई यदि यो देशका लागि कसैले केही गर्छ भने त्यो नेकपा एमालेले नै गर्छ भन्ने लागेको छ । दिनदिनै जनताको विश्वास गुमाउँदै गरेको पाँचदलिय गठवन्धनसँग निर्वाचन लड्नका लागि मलाई खासै जटिल लागेको छैन । जनतामा हामीप्रति जुनखालको उत्साह र रौनक देखिन्छ त्यसले हामी विजयको नजिक पुगेको आभाष भएको छ । नितान्त स्वार्थप्रेरित ढँगले भएको पाँच दलिय गठबन्धनसँग चुनावी एजेण्डा समेत छैनन् । हामी जुनखालको स्पष्टता बोकेर हिडेका छौं यसले पाँच दलसँगको हाम्रो लडाइलाई परिपक्व बनाएको छ । हामीले गरेको सभाहरुमा जनताले निकै उत्साहपूर्ण ढँगले सहभागिता जनाउनुभएको छ । हामीले अन्य दलले जस्तो जनतालाई क्षणिक लोभ लालचमा पारेका छैनौ । आजका जनता निकै चलाख छन् । उनीहरुको नेकपा एमालप्रतिको विश्वासलाई कसैले पनि कमजोर बनाउन सक्दैन ।
तपाईले निर्वाचन जित्ने आधारहरु के के हुन् ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको सरकारले गरेका विभिन्न जनपक्षिय कामहरु नै एमालेका उम्मेदवारहरुले जित्ने बलियो आधार हो । केन्द्रमा केपी शर्मा ओली, प्रदेशमा शंकर पोख्रेल र तुलसीपुरमा घनश्याम पाण्डेले गरेका लोकप्रिय कामहरु नै मुख्यरुपमा मैले जित्ने आधारहरु हुन् । पाँच वर्षको बीचमा के गर्ने भन्ने मसँग स्पष्ट एजेण्डा छ । मैले मेरो एजेण्डा जनताका बीचमा लगेको छुँ । मसँग तुलसीपुरलाई कुन लिकमा हिडाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ जुन कुरा मेरा विपक्षी उम्मेदवारमा छैन । तुलसीपुरका हरेक समस्यासँग म अत्यन्त निकट भएर काम गरेको छुँ । हरेक समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना बनाएको छुँ । चाहे कृषिको कुरा होस् या शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा नै किन नहोस् हरेक क्षेत्रलाई कसरी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो एजेण्डाहरु नै मेरो विजयका कारणहरु हुन् । मेरो लामो राजनीतिक जीवनमा मैले कहिल्यै पनि त्याग र समर्पणको बाटो हिड्न छाडिन । पद र प्रतिष्ठालाई कहिल्यै पनि प्रमुखता दिइन । राजनीतिक पहुँचलाई व्यक्तिगत फाईदाका लागि प्रयोग गर्ने सोच मेरो मष्तिस्कमा कहिल्यै पनि आएन । जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा होमिनु बाहेक मैले कहिल्यै पनि गलत कामहरुलाई आफुलाई केन्द्रीत गरिन् ।
मेरो व्यक्तिगत जीवनमा राजनीतिक यात्राको दौरानमा मैले गरेको त्याग र समर्पण नै मैले जित्ने आधार हो । म निम्न वर्गिय सुकुम्बासी परिवारको मान्छे हुँ । जनताका साना साना दुखहरु के हुन् भन्ने कुरालाई मैले मसिनोसँग छामेको छुँ । एउटा वर्गिय नेता भएका कारणले गर्दा मलाई वर्गिय मान्छेहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । मसँग हुँदा खाने र हुनेखाने सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएका कारणले गर्दापनि सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने र मैले जित्ने बलियो आधार हो । यसपटक मेयरमा निर्वाचन जित्ने मेरो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरलता हो । मसँग कुनै पनि कुराको घमण्ड र अहम्ता छैन । सामान्य परिवारको भएकाले पनि मेरो व्यक्तित्वमा कुनै खालको तडकभडक र कृत्रिमता छैन । आज जसरी जनताको घरमा एउटा सामान्य व्यक्तिका रुपमा गएको छुँ भोलिका दिनमा पनि म यस्तै अवस्था जनताका बिचमा जानेछुँ । मेरो सरलता पनि निर्वाचन जित्ने बलियो आधार हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यसपटक मेयरपदमा निर्वाचन जितिसकेको महसुस मलाई भइसकेको छ । गठबन्धका बिचमा अहिले पनि बलियो एकता रहेको छैन । उनीहरु आफै अलमलमा छन् तर नेकपा एमालेका बीचमा भने बलियो एकता रहेको छ । यही एकताले मलाई विजयी बनाउने छ । जनता अहिले पाटी भन्दा पनि नगरको समृद्धिमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिको खोजिमा रहेका छन् । यसकारण जनताले रोजेको र खोजेको जस्तो कुरा ममा भेटाएका कारणले गर्दा यसपटक निर्वाचनमा मेरो जित हुने निश्चित छ
तुलसीपुरको समग्र विकास गर्दै उपमहानगरको मुहार फेर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न मेरो उम्मेदवारी हो । तुलसीपुरलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हवका रुपमा विकास गरिएको छ । प्राविधिक धारका युग सुहाउँदा प्रयाप्त शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बाँकी जनपक्षिय काम गर्न हाम्रो उम्मेदवारी हो । मेरो पहिलो काम सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने हो । किसान र भूमिहिनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने एमालेको अभियानमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । ०५१ मै जग्गा धनी पुर्जा दिएर एमालले काम गरेरै देखाएको छ । सुकुम्वासी, भुमिहिन किसानलाई पुर्जा दिने काम गर्नेछौं । किनभने म स्वयं सुकुम्वासी हुँ । त्यसको पीडा मलाई अझै धेरै थाहा छ त्यो समस्या समाधान गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । अर्को एक घर एक धारा पु¥याउने र त्यसका लागि खानेपानी आयोजना निर्माण, व्यवस्थापनको काम गर्ने, तार केवलका कारण तुलसीपुर अस्तव्यस्त देखिन्छ ।
भुमिगतरुपमा केवल विस्तार गरेर हराभरा शहर निर्माण गर्ने, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषिमा अनुदानको व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, ठूलो युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने र उनीहरुलाई स्वरोजगारमा जोड्ने, गरिव र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपचार सेवा, तुलसीपुरमै सञ्चालित मेट्रो अस्पतालबाटै विशेषज्ञ सेवा दिएर उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौं । तुलसीपुर मेट्रो कलेजलाई प्रदेशकै नमुना कलेज बनाउने हो । गरिब तथा निम्न बर्गका जनतालाई प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने हो । अहिले सूचना प्रविधिको जमाना छ । विभिन्न प्रविधिलाई सदुपयोग गर्दै उपमहानगरलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पु¥याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, सुकौराकोट, छिल्लीकोटजस्ता पर्यटकिय क्षेत्र र मन्दिर,गुम्वा, मस्जिद, चर्चहरुको संरक्षण गर्दै तुलसीपुरलाई सबै जाति, भाषा, धर्मको साझा फूलवारीकोरुपमा स्थापित गर्ने काम हामीले गर्नेछौं ।
तर यी काम गर्ने ठाउँमा पुग्न त गठवन्धनको चूनौति होला फेरि ?
राजनीति भनेकै चूनौतिपूर्ण हुन्छ । मैले जन्मेदेखि नै ठूलठूला चूनौतिको सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु । डेढ वर्ष हुँदा आमा गुमाए, १४ वर्ष हुँदा बुवा गुमाएर एक्लो बनेको म आज संघर्ष, चूनौतिको सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु । हरेक प्रतिकुलतामा रमाउन जानेरै यहाँ आइपुगेको हुँ । हरेक अप्ठेरोमा उभिनसक्छु । म गठवन्धनसँगै लडेर पहिलो बन्नेछु । गठवन्धन जतिसुकै होउन, तुलसीपुरका जनता मेरो नै पक्षमा हुनुहुन्छ ।
Previousमेरो उम्मेदवारीले मभन्दा जनता खुसी छन् : स्यानी चौधरी
Nextनितिगत सुधारका लागि मेरो उम्मेदवारी : प्रेम शाह